आँसुमा नुन, समुद्रमा नुन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नुनमा कुनै अनौठो पवित्रता हुनैपर्छ, किनभने यो हाम्रो आँसुमा पनि छ र छ समुद्रमा पनि । – खलिल जिब्रान
श्रावण २३, २०७८ घनश्याम खड्का
मान्छेको रगत, पसिना, आँसु, मासु, पिसाब र वीर्य इत्यादि सबैमा पाइने एउटै साझा तत्त्व के हो ? यो दोस्रो वाक्य पढिसक्नुअघि नै तपाईंको मनमा उत्तर फिरिसकेको हुनुपर्छ– नुन । हो, नुन नै त्यस्तो पदार्थ हो, जो जिब्रोबाट भित्र पसेपछि मान्छेको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ, आफ्नो स्वादलाई दुरुस्तै राखेर !
अरू स्वाद पेटमा पुगेपछि बिलाउँछन्, नुनचाहिँ जीउभरि नै फैलिएर रजगज गर्छ । अरू प्राणी (मान्छेले पालेको बाहेक) नुन नखाने हुनाले तिनको जीउमा यसको बास हुने कुरै भएन । त्यसैले हुँदो हो, बाघले एक पटक मान्छेको रगत चाखेपछि अरू जनावर सिकार गर्ने रहरै गर्दैन, उसलाई मानिसकै रगत चाहिन्छ, किनभने यो नुनिलो हुनाले उधुमै स्वादिलो छ ।
मान्छेको जिब्रोमा नुनको जादु पहिलो पटक कहिले चल्यो होला ? त्यो कुन भाग्यमानी जिब्रो थियो, जसले करोडौं वर्षदेखि जमेर बसेको खल्लोपनालाई छिचोल्दै सेडियम क्लोराइड (नुनको रासायनिक नाम) लाई पहिलो पटक चाख्ने मौका पायो ? यस सम्बन्धमा ज्यादा तथ्य उजागर गर्ने इतिहास उत्खनन हुनै बाँकी छ । हालसम्म प्राप्त जानकारीले के संकेत गर्छ भने नवपाषाण युगका मानिसले पहिलो पटक नुन खान थालेका थिए । रोमानियाको नुन खानीमा सन् १९८४ देखि २००४ सम्ममा भएको उत्खननले संकेत गरेअनुसार, ८ हजार वर्षअघि मानव जिब्रोले नुनको स्वाद पाएको थियो (वेलर वलिभर, द अर्लियस्ट साल्ट प्रोडक्सन इन द वर्ल्ड, २००५) । त्यसपछि खानपानमा मानौं एक चमत्कार आयो । सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, नुनले जीउमा उत्साह ल्यायो होला, पेटमा बढी भोक जगायो होला र व्यञ्जनको प्रकार बढायो होला ।
दुई पृथक् तत्त्व सोडियम र क्लोराइडको सम्मिलन हुँदा जे बन्छ, त्यस यौगिकलाई नुन भनिन्छ । सोडियम एक खनिज हो, जो सामान्यतया नुनबाटै शरीरले लिन्छ । हुन त केही वनस्पति, फलफूल र सागपातमा पनि यो थोरै मात्रामा पाइन्छ । तर, यति मात्रैले शरीरलाई चाहिने जति सोडियम नदिने हुँदा ज्यान दुरुस्त राख्न नुन नखाई सुखै छैन । लाखौं वर्षको उद्विकासको क्रममा मानव शरीर यस्तो विन्दुमा पुगेको छ, जसलाई बाँच्न अब सोडियम नभई हुन्न । त्यसैले नुन नखाएर मान्छे जति पनि बाँच्न सक्ला, तर नुनमा पाइने सोडियम नभई कत्ति पनि बाँच्न सक्दैन (पिएर्रे लास्जलो, साल्टः अ ग्रेन अफ लाइफ, २००२) । नुन नै सोडियमको सहज आपूर्तिकर्ता भएकाले यसको प्रयोग आठ हजार वर्षदेखि सबै देश, काल र संस्कृतिका मानिसले निरन्तर रूपले गर्दै आइरहेका छन् ।
मानव शरीर स–साना कोषहरूको बृहद् पुञ्ज हो । कोषहरू जीवन्त भएनन् र ती एउटै संगीतपूर्ण लयमा चलेनन् भने शरीर गल्छ । सोडियमको मूल काममध्ये एउटा हो– यी कोषलाई जीवन्त राख्नु । विज्ञानको नियम नै हो, कुनै पनि काम हुनका लागि शक्ति चाहिन्छ । विज्ञानको भाषामा ‘काम’ भन्नाले अर्थशास्त्रको जस्तो आम्दानी हुने क्रिया होइन, बरु वस्तुमा हुने चाल हो । निर्जीवमा गति ल्याउन कुनै बाह्य तत्त्वको शक्ति आवश्यक हुन्छ । यही शक्ति नै ऊर्जा हो । सजीव आफैं चाल अवस्थामा आउँछ, तर यसका लागि पनि चाहिने ऊर्जा नै हो, जो खानेकुराहरूबाट उपलब्ध हुन्छ ।
मानव शरीरले भोजनबाट निकालेको ऊर्जा शरीरका हरेक कोषसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ रगतले । प्रकृतिले जीउभरि जालोसरि विच्छ्याएको नसामार्फत रगत कुदिरहेको हुन्छ । यसलाई एक रफ्तारमा कुदाइराख्न एउटा निश्चित चाप शरीरमा उत्पादन भइरहनुपर्छ । यस्तो चाप पैदा गर्ने काम पनि नुनले नै गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिनमा बढीमा ५ ग्राम नुन शरीरका लागि आवश्यक भनेर मात्रा तोकिदिएको छ । किनभने, नुन साह्रै कम भयो भने रगतमा कम चाप हुन्छ, जसलाई हामी अल्प रक्तचाप भनेर बुझ्छौं । बढी हुन गयो भने जीउ फेरि उच्च रक्तचापको सिकार हुन पुग्छ । यसको मात्रा ठिक्क मिलाएर खानुमा नै स्वास्थ्य सन्तुलनको कुञ्जी छ ।
नुनको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो– मांसपेशीलाई खुम्चिने र तन्किने प्रक्रियामा सघाउनु । लामो समय अलिनो खाँदा जीउ ओइलाएजस्तो अनुभव गर्नुभएकै होला ।
स्नायु ग्रन्थिमा सञ्चार ल्याउनु नुनको अर्को मुख्य काम हो । त्यसैले, नुनको मात्रा कम भएका बेला जीउ मात्रै गल्दैन, मस्तिष्क नै लाटो भएजस्तो हुन्छ । यसले स्वादसँग मात्रै नभएर नुनको सम्बन्ध मानिसको स्वास्थ्यमै भएको देखाउँछ । कतिसम्म भने शरीरमा अत्यावश्यक सोडियमको सबभन्दा भरपर्दो स्रोत नुन खानुअघि र खाएपछिको मानिसको यौन चर्या, सन्तानोत्पादन र आयुमा ठूलो अन्तर आएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । नुनको प्रयोग नगर्ने फिरन्ते युगका मानिसको जनसंख्या, सन्तानोत्पादनको दर आजको जस्तो सघन र तिनको आयु आजको जस्तो लामो थिएन । यो नहुनुमा तिनको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा सोडियम नहुनु नै हो । किनभने सोडियमको मात्रा कम भएका मानिसमा यौनेच्छा कम हुन्छ, बाँझोपन बढ्छ र बालबालिकाको स्वस्थ विकासमा बाधा पर्छ (बर्नार्ड एम मोइनर र टिलमन बी ड्रुक, अफ्रोडाइटी, सेक्स एन्ड साल्ट–फ्रम बटरफ्लाई टु म्यान, २००८) ।
युनानी सभ्यतामा प्रेम र सौन्दर्यकी देवी हुन्– अफ्रेडाइटी, जसको जन्म नुनसँग जोडिन आइपुग्छ । होमरको समकालीन युनानी कवि हेसियडको कविताअनुसार, आकाशको देवता युरानस एक पटक रात परेपछि पृथ्वीकी देवी गैयासँग रतिराग गर्न थाल्यो । त्यसैबेला उनीहरूको छोरा क्रोनसले पिताको लिंग काटेर समुद्रमा फालिदियो । समुद्रको सेतो फिँजमा युरानसको काटिएको लिंगबाट एक परम सुन्दरीको जन्म भयो । तिनै सुन्दरी देवीको नाम हो– अफ्रेडाइटी, जसको सौन्दर्य र मादकताको स्थान युनानका कुनै पनि देवीले लिन सकेका छैनन् ।
युनानीहरू नुनमा यौन र प्रजनन शक्ति दुवै छ भन्ने मान्थे । यसको प्रमाण काटिएको लिंगबाट पनि सेतो फिँज (नुन) समुद्रमा परेपछि परम सुन्दरी अफ्रेडाइटीको उत्पत्ति हुनु नै हो । रमाइलो के भने पछिल्लो वैज्ञानिक खोजले युनानी मान्यतालाई सत्य साबित गरिदिएको छ (बर्नार्ड... अफ्रोडाइटी, सेक्स एन्ड साल्ट...) । यसको सानो प्रयोग तपाईं आफ्नै जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ । केही दिन नुन नखानुस्, तपाईंमा सहवासको इच्छा हुँदैन । इच्छा भइहालेछ भने पनि यौनाङ्गको क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आउँछ । चित्त शुद्ध गर्न (वा काम रागको पकडबाट छुटकारा पाउन) ब्रतका बेला नुन नखाने चलन बसेको कारण सायद यही हो ।
यस्तो प्रभावी भएकाले होला, पृथ्वीभरका मानिसले दिनहुँ खाने सयौं परिकारमा नुन मिलाइएको हुन्छ । अचार, तरकारीमा त यो केही अपवादबाहेक अनिवार्य रूपले हालिन्छ, आलुचिप्सदेखि चाउचाउसम्मका तयारी खाद्य पदार्थमा पनि स्वादका लागि नुनको प्रयोग हुन्छ । अमिलो तितौरामा पनि यो चिनीसँग ढेस्सिएर बस्छ, खुर्सानीले सिलौटामा पाउने प्रत्येक घाउमा यो नुनचुक छर्न हाजिर हुन्छ, दही र भोगटेको सम्मिलनमा पनि यो सुटुक्क बस्न आइपुग्छ । सबै स्वादहरूमा, सबै परिकारहरूमा र सबै मौसममा नुन समान ढंगले प्रयोगमा आउने हुँदा यसलाई बाह्रमासे स्वाद भने पनि हुन्छ ।
नुनिलो, अमिलो, गुलियो, पिरो, टर्रो र तीतो गरी संसारमा ६ स्वाद छन् । हरेक दिन ज्यादा खपत हुने स्वादचाहिँ निसन्देह नुनिलो नै हो । धनी–गरिब, शिक्षित–अशिक्षित सबैले दिनहुँ प्रयोग गर्ने हुनाले नै मानिसमा भएको आयोडिनको कमी पूरा गर्न नुनकै सहरा लिनुपर्‍यो पोषणविदहरूले । सन् ८० को दशकसम्ममा संसारभर दुई अर्ब मानिस आयोडिनको कमीका कारण अनेक शारीरिक कष्टको सिकार भइरहेका थिए । राष्ट्र संघले सन् १९९० मा एउटा घोषणा गर्‍यो, नुनमा आयोडिन मिसाएर मानव जातिलाई आयोडिनको कमीका कारण आइलाग्ने दुःखबाट मुक्त पार्ने । समग्र मानिसलाई आयोडिन खुवाउने यो सबभन्दा सस्तो र सजिलो तरिका थियो । नभन्दै दस वर्षको अन्तरालमा विश्वभर आयोडिनको कमीबाट हुने कष्टकर परिणामहरू हराए (म्याक नेइल, डोनाल्ड जुनिएर, इन राइजिङ द वर्ल्डस सआइक्यु, द सेक्रेट्स इन द साल्ट, २००६०) । नेपालमै पनि पछिल्ला दशकहरूमा गलगाणमुक्त जनसंख्या हुनुमा आयोडिन लिएर आउने यही नुनकै कमाल छ । धेरैको कानमा अचेल पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको आयो नुनको जिंगलमा बज्ने सांगीतिक धुन गुन्जिन पुग्छ विविध सन्दर्भमा ।
अतिले खती गर्छ भन्छन् । नुनका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । यति धेरै गुणकारी हुँदाहुँदै पनि ज्यादा प्रयोगका कारण शरीरमा चाहिनेभन्दा बढ्ता सोडियम थुप्रिन पुग्दा करोडौं मानिसमा उच्च रक्तचाप, मुटुको रोग र पत्थरीको समस्या देखिन पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, बर्सेनि २५ लाख मानिसले बढ्ता नुन खानाले हुन गएको रक्तचाप र मुटुको रोगका कारण जीवन गुमाइरहेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ उच्च रक्तचाप तथा मुटुको उपचारमा खर्च भइरहेको छ । नुनको मात्रा घटाउन सके धेरैको ज्यान र अथाह अर्थ जोगिन सक्ने भएकाले सन् २०२५ सम्म प्रतिव्यक्ति नुनको खपत ३० प्रतिशतले घटाउन सन् २०११ मै राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले साझा प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्षजस्तो नुन कम खाने सुझाव दिन अनेक योजना विश्वभर चलाउँदै आएको छ । तर पनि, मानव जिब्रोले नुनको स्वाद घटाउन मानिरहेको छैन । टाढा किन जानु, नेपालकै उदाहरण हेरौं न । गत वर्ष देशी–विदेशी ७ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धाताले तयार पारेको एक खोजमूलक लेख युरोपको प्रसिद्ध जर्नल ‘रिसर्चगेट’ ले प्रकाशित गर्‍यो, जसमा नेपालीहरूले दैनिक कति नुन खान्छन् भन्नेबारे रमाइलो विवरण छ ।
‘हामी नेपाली नुन धेर खाँदो रहेछौं’ जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनका लेखक/अनुसन्धातामध्येका एक डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘यसले स्वतः थाहा लाग्छ, नुन धेरै खानेहरू उच्च रक्तचाप र मुटु रोगको सिकार छन् ।’
अध्ययनले नेपालीहरू औसतमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मात्राभन्दा दोब्बर नुन दिनमै खाने गर्छन् भन्ने देखाएको छ ।
स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर नुनको प्रभाव मानव समाज, इतिहास र सभ्यतामै निकै चर्को गरी पर्न गएको छ । नुनकै कारण युरोपमा ठूलठूला युद्ध भएको, रोमन साम्राज्यले कैंयौं देश कब्जा गर्न पुगेको र अमेरिकी स्वतन्त्रताको संग्राम लडिएका प्रमाण इतिहासमा सुरक्षित छन् ।
स्वाद र स्वास्थ्यमा यस्तो चर्को असर पार्ने नुनसँग मान्छेको हजारौं वर्षको सम्बन्ध छ । मानव जीवन र यसका सभ्यतासँग नुन कतिसम्म जोडिएको छ भने यो नहुँदा इतिहासका ठूला घटनाक्रम आधी–अधुरै रहन पुग्छन् ।
अचेल मासु फ्रिजमा हालेर धेरै दिनसम्म राख्न सकिन्छ । फ्रिज नभएका दिनहरूमा मानिसहरू नुनको सहाराले मासुलाई लामो समयसम्म राख्ने गर्थे । नुनमा पाइने क्लोराइडले कुनै पनि पदार्थमा भएको पानी सुकाउने गर्छ । माछा वा मासुको डल्लोलाई नुनै नुनले छोप्दा मासुमा भएको पानी नुनले खाइदिन्छ । त्यसपछि मासु तुरुन्त सुक्न पुग्छ । सुकेको मासु नसड्ने हुँदा यसको आयु स्वतः बढ्ने नै भयो । यसरी सभ्यताको सुरुआततिर मानिसलाई खानेकुरा जोगाएर राख्न सघाउने एउटै पदार्थ थियो नुन, जसले हाम्रा पुर्खालाई भोकमरीबाट जोगाउन मद्दत पुर्‍यायो । दुई हजार वर्षअगाडि माछालाई नसडाईकन राख्न नुनको प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ ।
पाँच सय वर्षअघिदेखि चिनियाँहरूले नुन हालेर ढुस्याएको भटमासको लेदो बनाउन नुनको सहारा लिए, जसका कारण यो निकै लामो समयसम्म खान सकिने गरी सुरक्षित रहन गयो । अचेल सोया सस भनेर विश्वभर फड्कारिने जिब्रोहरूमा पाँच सय वर्षदेखि चिनियाँले मिसाउन सुरु गरेको त्यही नुनिलो स्वाद छ ।
मानिसको जिब्रोलाई स्वादको जादु चखाएको सुरुआती शताब्दीहरूमा नुन अहिलेजस्तो सजिलै उपलब्ध थिएन । खपत बढी र आपूर्ति कम हुने भएपछि स्वादले मोहनी लगाएको नुनको ज्यादै ठूलो माग हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले यो ज्यादै मूल्यवान हुन गयो । युरोपतिर त यसलाई सेतो सुनसम्म पनि भन्ने गरिन्थ्यो । अनुसन्धाताहरूको निचोड के छ भने अचेल तेल खानीको ठूलो मूल्य भएजस्तै तिनताक नुन खानीको महत्त्व थियो । बुल्गेरियामा पर्ने युरोपको सबभन्दा प्राचीन सहर सोल्निस्टामा भएको अर्को उत्खननले यही तथ्य पुष्टि गर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, ७ हजार ५ सय वर्षअघि सोल्निस्टामा नुन उत्पादन कारखाना थियो र त्यस सहरका मानिस बाल्कन क्षेत्रमा नुन बेचेर खुबै समृद्ध बनेका थिए (थोमस एच मौघ, बुल्गेरियन्स फाइन्ड वल्डेस्ट युरोपियन टाउन, अ साल्ट प्रडक्सन सेन्टर, लस एन्जल्स टाइम्स–२०१२) ।
चट्टानबाट कसले, कहिले र कहाँ पहिले नुन निकाल्यो भन्ने तथ्य अझै निर्विवाद रूपले स्थापित हुन सकेको छैन । तर, समुद्रको पानी सुकाएर नुन निकाल्ने काम भने चिनियाँहरूले गरेका थिए भन्ने लिखित इतिहास छ । तीन हजार वर्षअघि समुद्रको पानी माटाको भाँडामा राखेर उमाल्ने काम चिनियाँहरूले गरे । उनीहरू पानी तबसम्म उमाल्थे, जबसम्म त्यो सबै सुकेर भाँडामा नुन मात्रै बाँकी हुँदैनथ्यो । केही वर्षपछि चीनमा फलामे ताप्केमा पानी उमाली सुकाएर नुन बनाउने क्रम सुरु भयो । त्यसको हजार वर्षपछि रोमन साम्राज्यले समुद्रको पानीबाट नुन बनाउने पद्धति युरोपमा लगेको थियो । चीनमा सुरु भएको यही प्रविधि नै आज परिस्कृत रूपमा समुद्रबाट नुन निकाल्न प्रयोग गरिन्छ (मार्क कुर्लान्स्की, साल्ट ः अ वर्ल्ड हिस्ट्री, २००२) ।
संसारका धेरै भागमा एकताका नुनलाई पैसाको रूपमा स्विकारिन्थ्यो र यसैको विनिमियम गरी व्यापार चलेको थियो । इटलीको सलारियामा झैं धेरैतिर नुन मार्गको विकाससमेत भएको थियो चार हजार वर्षअघि ।
खासगरी नुनका दुई मुख्य स्रोत छन्, सोडियम क्लोराइडको चट्टानी खानी र समुद्रको पानी । केही दशकअघिसम्म नेपालमा भोटतिरबाट ल्याइने चट्टानी नुनको प्रयोग ज्यादा थियो । बूढाहरूको स्मृतिमा अहिले पनि यो ढिकेनुन भनेर सम्झनामा थपक्क बसेको छ । अचेल ज्यादातर ढिकेनुन गाउँतिर गाईवस्तुलाई खुवाउन प्रयोग गरिन्छ ।
कुनै समय समुद्र वा सरोवर सुक्यो भने लाखौं वर्षपछि त्यो एक नुनिलो चट्टानका रूपमा देखा पर्न जान्छ । यही चट्टान नै ढिके नुनको स्वरूप हो । ढिकेनुन अक्सर सेतो स्फटिकजस्तो आकारमा पाइन्छ । तर, सोडियम र क्लोराइडको मात्रामा घटबड हुँदा हरियो, नीलो, पहेंलो इत्यादि अनेक रङहरूमा पनि नुन उपलब्ध हुन्छ, जसलाई खानभन्दा बढी सजावटको प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ ।
नुनको सम्बन्ध शासन र कर्मचारी संयन्त्रसँग पनि उत्तिकै पुरानो छ । रोमन सम्राटले नुन किन्न आफ्ना सिपाहीलाई निश्चित पैसा दिन थाले ज्यालाका रूपमा । ल्याटिनमा ज्यालालाई स्यालरियम भनिन्छ, जो साल्टबाट बनेको हो । अचेल तलबबापत सबैले भन्दै आएको ‘स्यालरी’ यही स्यालरियमबाट बनेको हो । यसको सोझो अर्थ के भने हामीले तलब भनेर बुझ्दै आएको रकमको शीर्षक खासमा नुन हो । घुमन्ते मानवले नुन बोक्नकै लागि ऊँटलाई घरपालुवा बनायो । नुनकै कारण स्पेनविरुद्ध उसका उपनिवेश देशहरू बेल्जियम, लक्जम्बर्ग र नेदरल्यान्डले युद्ध गरे । नुन खानीकै कारण पोल्यान्डले आफ्नो साम्राज्य खडा गर्न सक्यो । नुनको व्यापारिक मार्गकै कारण म्युनिखजस्तो प्रसिद्ध सहरको जन्म भयो । गान्धीले स्वतन्त्रता भारतको संग्राम नुन आन्दोलनबाटै थालेका थिए । (पिएर्रे लास्जलो, साल्ट ः अ ग्रेन अफ लाइफ, २००२) । नेपाली हृदयले गर्दै आएको ‘नुनको सोझो’ ले पनि सायद नुन किन्न पैसा दिने पद्धतिलाई नै संकेत गर्छ । आठ हजार वर्षमा नुन मानिसको रगत, पसिना, आँसु, पिसाब, वीर्य इत्यादि सबैतिर पसेको छ । यसले हाम्रो हृदय जितेको छ । त्यसैले यो धेरै खाँदा हृदयाघात हुने लक्षणहरू देखिन्छ, देखिइरहेको छ ।
खानाबाहेक चिकित्सामा पनि नुनको प्रयोग व्यापक छ । भनिन्छ, जिब्रोमा स्वाद छाड्नु अतिरिक्त १४ हजार काममा नुन संलग्न छ । दाँत दुख्दा मनतातो पानीमा कुल्ला गर्न होस् कि जुकालाई रगत छदाएर मार्न होस्, मानिस नुनकै प्रयोग गर्छन् ।
जसरी संसारका सबै भान्छामा नुन पुगेको छ, त्यसै गरी अभिव्यक्त भएका सबै भाषाहरूमा यसले उखान पनि हालिमागेको छ । झोक्राएको मानिसलाई तुलना गर्नुपर्‍यो भने ‘नुन खाएको कुखुरा’ जस्तो भन्ने चलन सबै नेपाली संस्कृतिमा छ । कुनै कुराको अनुभव नभई त्यसलाई नपत्याउनु भन्नुपर्दा कंगोलीहरू ‘नचाखी नुन नकिन्नु’ भन्छन् । अनावश्यक काम गर्नुको अर्थ छैन भन्नलाई इटालेलीहरू ‘नुन र सल्लाह नमागी नदिनू’ भन्छन् । ‘काँडाको टुप्पामा नुन अड्याउन जति कठिन छ उति नै कठिन छ प्रेममाथि विजय पाउन’ भन्ने अमेरिकी उखानले प्रेमलाई बुझ्ने मनुष्य हृदय दुर्लभ भएको संकेत गर्छ ।
पृथ्वीका अनेक विचारशील मानिसले पनि नुनका सम्बन्धमा घतलाग्दा अभिव्यक्ति दिएका छन् । युनानी दार्शनिक पाइथागोरसले नुनलाई सूर्य र समुद्रको सहोदर सन्तान भनेर अर्थ्याएका छन् । रहस्यदर्शी कवि/लेखक खलिल जिब्रान भन्छन्, ‘नुनमा कुनै अनौठो पवित्रता हुनैपर्छ, किनभने यो हाम्रो आँसुमा पनि छ र छ समुद्रमा पनि ।’ राम्रोसँग नचिनी कसैलाई नपत्याउनू भन्ने उपदेश दिन सिसोरो भन्ने गर्थे, ‘सँगै बसेर धेरै नुन नखाइन्जेल कसैलाई विश्वास नगर्नू ।’
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७८ १०:२६
आफू अल्पमतमा पर्ने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला लेख्ने नेतृत्व लिएनन्, बरू दायाँबायाँ फैसला भए फरक राय लेख्न सक्ने सम्भावना भएकामध्येका खतिवडालाई अघि सारे
‘लेखकीय जिम्मेवारी मलाई माननीयज्यूहरुले दिनुभयो । यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ ।’
असार ३०, २०७८ घनश्याम खड्का
काठमाडौँ — संविधानको साँचो पालना भए रक्तपातबिनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको बहिर्गमन र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ जीवन पाउनुमा विधिशास्त्रको यही मान्यता लुकेको छ ।
संविधानको मर्मको बृहद् व्याख्या गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ अहिले चर्चामा छ । न्यायिक वृत्तमा त्योभन्दा बढी चर्चामा छन् फैसलाका मूल लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा उनी चौथो न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्चको ११ कार्यदिनमा पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) गरी ७७ जनाले बहस गरेपछि आएको सर्वोच्चको बहुप्रतीक्षित फैसला लेख्ने जिम्मेवारी खतिवडाले नै किन पाए ? यसको जवाफ इजलास गठनसँग उठेका विवाद अनि पहिलो इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरूसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एन्ड चुज’ गरेर इजलास गठन गरेका थिए, जसमा इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए र अदालतभित्र बहुमत न्यायाधीशले पनि । नेकपा फुटेर दुई दल पहिलेकै अवस्थामा रहने भनी फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठे पनि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई इजलासबाट हटाउन मानेनन् । परिस्थिति कस्तोसम्म आयो भने, इजलासमा सामेलमध्येका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू विवादित इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेर बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश खतिवडा पनि समावेश भए ।
सामान्यतया इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै फैसला लेख्ने चलन छ । तर, विषयवस्तुको ज्ञान तथा लेखक क्षमता भएकालाई सल्लाहमै फैसला लेख्न दिने पनि गरिन्छ । जानकार अधिवक्ताहरूको निष्कर्ष छ, यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश आफैंले फैसला लेखेको भए यही भाषा र यही आदेश निश्चय पनि आउने थिएन । त्यसो हुँदा फैसलासँग चित्त नबुझेका न्यायाधीशले आआफ्नो फरक राय पेस गर्ने थिए । यो परिदृश्यमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार दुई न्यायाधीश प्रस्ट रूपमै प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध उभिने देखिएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश मीरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको साथ लिने सरकारी प्रयास भएको थियो । तर खड्का र कार्कीबाट पनि त्यस्तो कुनै संकेत नआएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चको दोस्रो इजलासबाट सदर नहुने प्रस्ट आकलन गर्न सकिने स्थिति बन्यो । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशले फैसला लेख्ने नेतृत्व लिएनन्, बरु दायाँबायाँ फैसला भए फरक राय लेख्न सक्ने सम्भावना भएकामध्येका एक न्यायाधीश खतिवडालाई नै उनले अघि सार्न पुगे ।
‘हामीले रिटको सुनुवाइपछि एक साता गहन छलफल गर्‍यौं,’ सोमबार मध्याह्न फैसला सुनाउँदै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्षिप्त बोलेका थिए, ‘निष्कर्षमा पुग्दा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेश जारी गरेका छौं ।’ उनले न्यायाधीश खतिवडाप्रति संकेत गरे र भने, ‘यसमा राय उहाँले लेख्नुभएको हो ।’
त्यसपछि खतिवडाले फैसला पढेर सुनाएका थिए । फैसला आफूले मात्रै लेखेको नबुझियोस् भन्नका लागि उनले परमादेश पढ्न अघि थपेका थिए, ‘यद्यपि लेखकीय जिम्मेवारी मलाई माननीयज्यूहरूले दिनुभयो । तर यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ ।’
कानुनविद्हरूका अनुसार सम्भवतः हालसम्मकै लामो १ सय ६७ पृष्ठको फैसलामा खतिवडाले संविधानवादको बृहद् व्याख्या गरेका छन्, संसारमा भएका प्रमुख विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेका छन् र प्रत्येक तर्कलाई पुष्टि गर्ने उद्धरण पनि सामेल गरेका छन् । उदयपुरमा जन्मीहुर्की लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेका र देश–विदेश पढेका खतिवडाको ज्ञान फैसलामा झल्किन्छ ।
‘उहाँ हरेक कुरालाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने निष्ठावान् र इमान भएको सुयोग्य न्यायाधीश त हुँदै हो, उहाँको लेखनशैली पनि राम्रो छ जुन सबैको हुँदैन,’ खतिवडाको जिल्लादेखि पुनरावेदन र सर्वोच्चको इजलासहरूमा सयौं पटक बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्, ‘त्यसमाथि अरू सबै न्यायाधीशको पनि इन्पुट उहाँले पाउनुभयो, त्यसैले नै कोसेढुंगा सावित हुने फैसला आउन सम्भव भएको हो ।’
फैसलामा खतिवडाले परम्परागत विधिशास्त्र र समसामयिक विधिशास्त्रका बारेमा पनि विवेचना गरेका छन् । परम्परागत विधिशास्त्रले संवैधानिक नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषयमा मान्दैन । तर पछिल्लो समय विभिन्न देशमा विधिको शासनका लागि राजनीतिज्ञमा संवैधानिक नैतिकता नभए त्यसलाई मुद्दाको विषयका रूपमा लिन थालेका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतले यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै ‘संवैधानिक लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध हुनु नै संवैधानिक नैतिकता हो’ भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । त्यसलाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले फैसलामा लेखेका छन्, ‘संवैधानिक नैतिकता भन्नु र सामान्य अर्थमा नैतिकता भन्नु फरकफरक कुरा हुन्, विकसित नवीनतम अवधारणाहरूप्रति अभिरुचि राख्नु हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी नै हुनेछ ।’
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने संविधानको प्रस्ट व्यवस्था पालना गर्ने नैतिक दायित्वबाट ओली चुकेको र त्यसलाई सदर गर्न नहुने नैतिकता राष्ट्रपतिबाट नदेखिएको निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसारै बहुमत लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगेका देउवालाई नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक नैतिकताको संकट हो । यसरी अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने संविधानका सर्तलाई गरे पनि हुने नगरे पनि हुने सामान्य नैतिकताको नियमजस्तो मान्न नसकिने ठहर फैसलामा छ । यसै निष्कर्षको जगमा उभिएर सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
खतिवडाको उक्त रायमा आफू पनि सहमत छु भनी प्रधानन्यायाधीशसमेत इजलासका अन्य सदस्यले सही गरेका छन् । यसरी लामो समय जारी सत्ताको हत्कण्डालाई एकै फैसलाबाट राफसाफ गरिदिने न्यायाधीश खतिवडा सर्वोच्चमा २०७२ देखि कार्यरत छन् । फागुन २०१५ मा जन्मेका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम नजिकै पुगेर २०८० फागुनमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०८